musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau dzeEurope » Nyowani yeEuropean ski mwaka yakarembera muchiyero
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Resorts • Kutarisirwa • chengetedzo • Sports • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Kuwedzera kwakajairika mukuda kunozokanganiswa sezvo denda, zvakare, richisimudza musoro waro kumisika mikuru ye ski sosi uye kwekuenda.
Kudiwa kwekufamba nzendo muEurope kunotarisirwa kurova gore rino nekuda kwekukwira kwemakesi eCCIDID-19 uye nekugona kuderedzwa kwetsoka munzvimbo huru dzeku skiing kutanga kwaZvita.
Zvita kazhinji inoona vanofamba skiing vafambi vachienda Europe, iyo inobvisa kuderera kwekondinendi mushure mezhizha mukufamba. Semuenzaniso, Europe yakaona nzendo dzepamba nedzekunze dzichiwedzera ne38.3% kubva munaNovember kusvika Zvita muna 2019 - gore rapfuura risina kukanganiswa nedenda.
Uku kuomarara kwekuwedzera kwekudiwa kwezororo muna Zvita kazhinji kunotamba mumaoko eEuropean ski resorts, nevazhinji vanoisa Zvita sekutanga kwemwaka wepamutemo weski. Nekudaro, iyo yakajairwa kuwedzera kwekuda kuchakanganiswa sezvo denda, zvakare, richisimudza musoro waro kumisika mikuru ye ski sosi nenzvimbo.
Maererano neongororo ichangoburwa, makumi maviri neshanu muzana evakapindura kuEurope vakati vanga vachiri 'kunetsekana zvakanyanya' nedenda reCOVID-25. Huwandu hwakakura kudaro hahuna kumira zvakanaka, uye kambani inotarisira kuti vazhinji vekuEurope vachamisa kana kudzima hurongwa hwezororo kana vaona kutapurirana kwehutachiona kuri kutanga kuwedzera zvakare.
Skiing hotspots mune dzakafanana neFrance, Italy neSwitzerland dzichange dzichitya zvakanyanya, nevazhinji vachivimba nemwedzi iri kuuya kugadzirisa kumwe kurasikirwa kwakaitika mumwaka miviri yadarika. Europe, zvakare, inozviona yave pane epicenter yedenda - sezvo mwaka we ski unotanga kuwedzera.
Iyo COVID-19 mamiriro mukati Jerimani inogona kunge iri chinhu chakakosha pakusarudza kubudirira kwemwaka unouya weEuropean ski. Germany ine vafambi vakawanda kupfuura chero imwe nyika muEurope, zvichiita kuti musika uyu uwedzere kukosha kunzvimbo dzekutsvedza. Pamusoro pezvo, Germany yaive yechitatu-yepamusoro-soro yekushandisa kunze kwemusika musika wepasi rose muna 2020, ichiratidza simba rayo rekushandisa uye kuda kuenderera mberi nenzendo dzepasirese panguva yedenda.
Sezvakataurwa muna Mbudzi 24, 2021, huwandu hwehutachiona hutsva hweCCIDID-19 hwakanyoreswa mukati mezuva rimwe hwasvika pakakwirira Jerimani. Mukuwedzera, chiitiko chemazuva manomwe munyika yose chakakwira kupfuura 400. Idzi nhamba dzinotyisa mu Jerimani ichagadzira chikonzero chekunetsekana pakati penzvimbo dzekuEurope dzekutsvetera sezvo zvirambidzo zvekufamba zvingangotevera, zvichigadzira kukanganisa kukuru mukugadzirwa kwemari yenzvimbo dzekutandarira nemamwe mabhizinesi akabatana nekushanya kweski.